Somaliland oo qabatay lacag fara-badan oo dollarka madow (SAWIRRO) | Dhacdo
Somaliland oo qabatay lacag fara-badan oo dollarka madow (SAWIRRO)
Ciidanka Booliska Somaliland ayaa maanta Magaalada Hargeysa ku soo bandhigay lacag fara-badan oo dollarka madow ah, ka dib markii gacanta lagu soo dhigay raggii watay.
Taliyaha CID-da ahna Afhayeenka Booliska Somaliland, G/sare Faysal Xiis Cilmi ayaa sheegay in maanta gacanta lagu soo dhigay laba nin oo ka soo jeeda Puntland, isla-markaana watay lacag cadadkeedu gaarayo hal milyan, soddon iyo shan kun iyo shan boqol (1,350,500) oo dollarka madow ah.
“Ciidanka Booliska, iyagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka loo igmaday waxay gacanta ku soo dhigeen laba eedeysane, oo u dhashay Puntland, kuwaa oo gacantooda lagu soo qabtay hal milyan, soddon iyo shan kun iyo shan boqol oo dollarka madow ah.” Ayuu yiri Afhayeenka Booliska Somaliland.
Afhayeenka oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in raggaasi ay doonayeen inay lacagtaasi ku qalqal-geliyaan amniga Somaliland, sarifka lacagaha qalaad iyo weliba ganacsatada deegaanka.
“Kuwaa oo doonaayay inay ku qalqal-geliyaan nabadgelyada guud ee dalka, inay ku curyaamiyaan sarifleyaasha iyo ganacsatada Somaliland. Eedeysane-yaashaas waxay kala yihiin Faysal Cabdishakuur Yuusuf, ina Saynab Cabdullaahi, 24 jir ah iyo Oomaar Maxamed Axmed, ina Xaliimo Faarax oo 37 jir ah.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inuu jiro nin kale oo saddexaad oo lagu soo qabtay lacag kale oo dollarka madow, kaasoo hadda gacanta laamaha ammaanka ku jira.
“Sidoo kale waxay Ciidanka Booliska gacanta ku soo dhigeen eedeysane Cali Faarax Warsame. Waa nin weyn oo loo yaqaano Cali Wadaad, kaasoo gacantiisa lagu soo qabtay labaatan kun iyo sideed boqol oo dollarka madow ah.” Ayuu yiri Faysal Xiis.
Xiis ayaa intaa ku daray “Dhammaan eedeysane-yaashaas ee saddexda ah, haddii Ilaahay yiraahdo waxaa loo gudbin doonnaa maxkamadda iyo xeer ilaalinta awoodda u leh qaadista dembigaasi.”